एनआरसी भाजपाको राजनैतिक मुद्दा मात्र - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारएनआरसी भाजपाको राजनैतिक मुद्दा मात्र
एनआरसी भाजपाको राजनैतिक मुद्दा मात्र
December 4, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
देशमा बस्ने सबै देशवासी हुन्। भाजपालाई उनीहरूको नागरिकता खोस्ने अधिकार कसले दियो? भाजपाले एनआसरीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाइरहेको छ, तर मैले यसको विरोध राजनैतिकरूपले होइन मानवीय आधारलाई लिएर गरेकी हुँ। किन भने दसकौंदेखि देशमा बस्दै आएका नागरिकलाई अचानक विदेशी घोषित गर्न सकिन्न। यो सम्भव कुरा होइन।’
कोलकाता,4दिसम्बर
‘देशका सबै नागरिक वैध नागरिक हुन्। एनआरसी त भाजपाको राजनैतिक वयानबाजी मात्र हो। यो कहिल्यै सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनेका छन्। भाजपा आफ्नो राजनैतिक वयानबाजीमा व्यस्त रहेको तर यसले देशका नागरिकलाई कुनै प्रभाव नपर्ने बताए।
उनले भनिन्, ‘देशमा बस्ने सबै देशवासी हुन्। भाजपालाई उनीहरूको नागरिकता खोस्ने अधिकार कसले दियो? भाजपाले एनआसरीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाइरहेको छ, तर मैले यसको विरोध राजनैतिकरूपले होइन मानवीय आधारलाई लिएर गरेकी हुँ। किन भने दसकौंदेखि देशमा बस्दै आएका नागरिकलाई अचानक विदेशी घोषित गर्न सकिन्न। यो सम्भव कुरा होइन।’
भर्खरै बङ्गालको उपचुनाउमा एनआरसीको आतङ्कको परिणाम देखापरेको र एनआरसीकै आतङ्कको कारण भाजपा उपचुनाउमा हारेको उदाहरण पनि उनले राखिन्। ‘राजनैतिक वयानबाजी गरेर देशका नागरिकहरूमा आतङ्क फैलाउनु हुँदैन,’ व्यानर्जीले भनेकी छन्, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीति गरेर भाजपाले देशवासीलाई सताउनु छोड्नुपर्छ।’
यता केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले 2024 सम्ममा एनआरसी लागू गरेर अनुप्रवेशकारी विदेशीहरूलाई देशबाट लखेट्ने घोषणा गरेका छन्। शाहको यस्तो वयान विरुद्ध काङ्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि कटाक्ष गरिरहेका छन्।
‘केही दलहरूको मुखमा मात्र गोर्खाल्याण्ड छ तर मनमा अर्कै छ’
गोरामुमो भन्छ-छैटौं अनुसूचीमा एनआरसी लागू हुँदैन